समाजवादी पार्टीमा सरकारबाट बाहिरिन दबाब – Khabar Silo
काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री पद लिएर सरकारमा सामेल भएको समाजवादी पार्टीभित्रै सरकारबाट बाहिरिन दबाब बढ्दै गएको छ। डेढ वर्षअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षसँग संविधान संशोधन गराउने हस्ताक्षर गराएर सरकारमा गएका समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अहिले दबाब बढ्दै गएको छ।
गत वैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरणपछि नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर सरकारबारे आधिकारिक धारणा बनाउने सहमति भएको थियो।
समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले कात्तिकको २९ र ३० गते बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारेमा धारणा तय गर्ने बताए। बैठक बसेमा एकीकरणपछिको पहिलो बैठक हुनेछ। पार्टीे पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कात्तिक २८ गते संघीय परिषद्को बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीमा संघीय परिषद्को अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले र केन्द्रीय समितिको अध्यक्षता उपेन्द्र यादवले गर्ने व्यवस्था छ।
सोमबार बसेकोे समाजवादीकोे पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति र संघीय समितिको बैठकसँगै विभागहरूलाई पूर्णता दिएको छ। बैठकले महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय अनुशासन आयोग, अमरेशनारायण झाको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय लेखा आयोग र डा. शिवजी यादवको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ। त्यसैगरी मोहनलाल चौधरी प्रमुख रहेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था विभाग, उदयकान्त मि श्र प्रमुख रहेको भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन विभाग र रामरिझन यादव संयोजक रहेको समाजवादी जनअभियान गठन गरेको छ।